Britain By tareenka - 8 On Oo Talooyin Off-Track | Save A tareenka
Home > Tareenka Safarka ee Britain > Britain By tareenka - 8 On Oo Talooyin Off-Track
Britain ayaa u duceeyey by shabakad badan tareenka taas oo saamayn ay bulshada taariikhda iyo horumarinta dhaqaalaha jiilalka.
Oo haddii aad tahay enthusiast tareenka, xadiidka UK fasaxa fududeeyaa hawlaha xiiso meelo jidka oo dhan ka Aberdeen si Penzance.
Sidaas darteed haddii aad qalbigayga ka go'an on arkaya Britain tareen, halkan waa toddoba iyo Talooyin off-track.
Booqashada Central Station Glasgow waa waajib - ma ahan oo keliya waxa ay kugu xiri doona Scotland ayaa farxaan muuqaal dabiici ah, laakiin waxa ay sidoo kale leedahay 91 heerka ansixinta boqolkiiba ka Focus Gaadiidka watchdog, Idaacadda sayidkiisa Paul Lyons waddaa afar tours maalin iyo waxa xiddigaha ay u gaar ah taxane BBC TV.
Birmingham New Street waa xarun kale oo ku faanta heerar sare oo qancinta macaamiisha. The xarunta tareenka West Midlands waxaa si buuxda dib in 2015 iyo faanaa doorashada ah maqaayado qabow, oo ay ku jiraan ah ee-guriga Five Guys wadajir ah Burger - fiican ee god-stop.
No enthusiast tareenka dhabta Baxaan Britain oo aan si fiican sahaminta King Cross Station ee London ee. Waa soo socda si King Cross ee St Pancras dhulka hoostiisa mara Station, ayaa ku dhow inay Regent ee Park iyo Maktabadda Ingiriiska, oo hoy u ah Madal qarsoodi ah 9 ¾, dhibic ka tagay ee ku Hogwarts Express - oo ku filan ayaa sheegay in.
Tareen app Raildar qoreysa map a live ah tareen kasta on UK network rail - version firfircoon xitaa muujinaysaa tareenada socdaan. app khiyaali lover Tani tareen ayaa sidoo kale waxaa ka mid ah Layouts track iyo maps Isgoyska - waxa fikrad cajiib ah!
Haddii aad tahay ka dib markii reading tareenka la xiriira madaama lugtii, Lines isku midka ah arka qoraaga Ian Marchant eegno isagoo qoslaya at 175 sano jaceeylka Britain ee tareenada. Duugay jaceyl iyo kaftan, waa aragti ku dayasho mudan gelin qof British iyo dhaqanka.
6. Akhrinta for dunida dhabta ah
Dabayaaqadii ah 19th oo hore 20th qarniyo, Hanuuniyaa tareenka George Bradshaw ahaayeen apps ay maalintii oo ay bixiyaan macluumaadka cusub ee ku saabsan jidadka tareenka agagaarka Britain iyo guud ahaan qaaradda Europe. The April 1910 hagaha waxaa lagu qoray meesha ugu sarreysa ee xadiidka tareenka ee Ingiriiska wuxuuna noqday bible loogu talagalay dadka tareenka - find edition reprinted online at Amazon.
7. barashada Online
Free ama si macquul ah-hoodu internet waa iska diyaar on jidadka tareenka UK badan iyo xarumaha magaalada, sidaa darteed haddii aad safarka waa qayb ka mid ah dambe a -aadmina, baranaya shahaado online iyadoo ciyaartoyda Anglia Ruskin Distance Learning sii wadi kartaa kala go '. Oo waxaa wax nolol-adkaynaya ku saabsan oo sheekeysanaya, si fasalka ee dalal kala duwan inta aad ku wareegsan rogo soohdimaha iyo guud ahaan clifftops.
Raac toddoba kuwaas on iyo off-track talooyin fasax British rail aadan weligaa ilaawin - aad aragto saldhiga.
Ma leedahay talooyin safarka tareenka? iyaga wadaag qaybta comments iyo haddii aad u baahan tahay tareen – Save tareen A.
Ma rabtaa in aad Cudarada our post blog gal goobta, sidoo kale aad qaadi karto sawiro iyo qoraal iyo kaliya na siiso credit ah la link a si post blog this, ama aad halkan riix: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fbritain-by-train-8-on-and-off-track-tips%2F%3Flang%3Dso - (wax yar hoos si aad u aragto Code Cudarada ah)
#ukrail britain britrail rail tareenka travelengland